Inona ny antony mahatonga ny sanda fanaraha-maso kalitao tsara an'ny ZR-1000 fitsapana fahombiazan'ny tsimokaretina tsy mifanaraka amin'ny fari-pitsipika ilaina (2200 ± 500 CFU)?
(1) Ny fampiatoana ny bakteria dia tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra nasionaly.
(2) Ny tahan'ny fikorianan'ny paompy peristaltika dia tsy tsara indrindra, manandrana mampiakatra na mampihena ny tahan'ny fikorianana.
(3) Zahao ny haben'ny lovia Petri (lovia fitaratra indrindra).
Inona ny antony mahatonga ny bakteria hafa hitombo aorian'ny santionany amin'ny ZR-1000 Bacteria filtration efficence tester?
（1） Mivoaka ny fantson-drano, zahao raha mivoaka ny fantsom-pifandraisana mampifandray amin'ny silika amin'ny vera.
（2） Ny tontolo iainana dia tsy aseptika rehefa manomana haitao ara-kolontsaina.
（3） Masiaka ny tontolon'ny asa na tsy mahomby ny sivana HEPA.
（4） Zahao ny haben'ny lovia Petri (lovia fitaratra indrindra).
Ahoana ny fomba hamahana ilay olana izay tsy zakan'ny mpanadihady fahombiazan'ny bakteria ZR-1000 (BFE).
（1） Aorian'ny fanerena bokotra herinaratra, tsy mandeha ny jiro jiro mena, tsy mandeha ihany koa ny jiro sy ny jiro UV, zahao raha mifamatotra ny tsipika herinaratra ary misy ny famatsiana herinaratra, ary zahao raha misy ny switch leakage protection any aoriana ny fitaovana nohidiana.
（2） Ny herinaratra manondro ny jiro dia mandeha, ny jiro ary ny jiro UV dia mandeha ihany koa saingy mainty ny efijery ary tsy afaka miakatra ny masinina, miala amin'ny famatsian-jiro, avereno indray ary atsindrio ny bokotra resy eo amin'ny tontonana eo aloha.
Ny olana parallallism an'ny A, B lalana roa an'i Sampler ao amin'ny ZR-1000 fitsapana fahombiazan'ny bakteria (BFE). Ny valin'ny santionany amin'ny lalana A sy B roa dia samy hafa.
（1） Hamarino raha mifanaraka ny taha tahan'ny A sy B.
（2） Hamarino raha mitete ny fantson-drano, ary zahao raha mety ny haben'ny petri lovia (indrindra ny lovia Petri fitaratra, raha avo loatra ny lovia petri, dia hampiakatra ny sosona ambony izy io, ka hiteraka ny sampler Anderson mitete).
（3） Hamarino raha voasakana ny aperture an'ny sampler tsirairay avy amin'ny Anderson (fomba fitsapana tsotra, fandinihana maso, raha voasakana, diovy alohan'ny fitsapana).
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fanodikodinan'ny fahombiazan'ny sivana an'ny fahombiazan'ny sivana ZR-1006 masculine sy ny tester resistence airflow?
Manolo-kevitra ny hampiasa santionany mahazatra (toy ny santionany notsapain'ny fikambanana manam-pahefana) na sivana mahazatra mahazatra misy fiolahana fitsapana fahombiazan'ny aerosol filtration raha oharina. Raha ahiahiana ny fiviliana dia nanolorana anao ho any amin'ny masoivohom-pandrefesana mahafeno fepetra ho an'ny fikajiana. Mila fikojakojana ilay fitaovana rehefa mandeha ny vanim-potoana mihazakazaka, toy ny fikojakojana fiara ihany. Ny haben'ny fikojakojana dia ny fanadiovana ny fantsona anatiny sy ivelany rehetra, manolo ireo singa sivana, sivana ary manadio ny mpamokatra aerosol, sns.
Ny fahombiazan'ny sivana ZR-1006 saron-tava masonkarena sy fisedrana fanoherana ny airflow dia tsy afaka manisa fotoana ary mihazakazaka aorian'ny fanombohana santionany.
Voalohany, zahao raha nahatratra ny sanda napetraka ny fikorianan'ny santionany (toy ny 85 L / min), ny masinina dia tsy hanomboka santionany alohan'ny hahatongavan'ny ony amin'ny sanda napetraka (na avo loatra na ambany loatra). Ny ankamaroan'izy ireo dia azo vahana aorian'ny fanoloana ny landihazo sivana amin'ny maodelin'ny mpankafy. Hamarino raha voasakana ny fantsom-panafody, ary tokony hisokatra ara-dalàna ny valizy famoahana ny efitrano fampifangaroana.
Raha toa ka tsy mahatratra 1.0 L / min ny fikorianam-be sy ny fidinana dia mila soloina ny sivana HEPA an'ny modely photometra. Matetika dia tsaraina amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny sandan'ny tsindry hamaritana raha mila soloina sy tazomina izy (tsindry tsindry: tsindry santionany> 5KPa, tsindry ambony sy ambany> 8Kpa).
Inona no tokony hataoko raha toa ka tsy mahatratra ny sanda kendrena ny fifantohana aerosol any ambony an'ny ZR-1006 saron-tava mason-tselika ZR-1006?
Azo inoana fa satria mila fanadiovana sy fikojakojana ilay fitaovana. Ity olana ity dia azo vahana amin'ny fanadiovana ny lohan'ny lozisialy aerosol, fantsom-pifaneraserana, efitrano fampifangaroana, mpankafy ary môtô photometera.
Avy eo zahao raha mety ny vahaolana sira, na mihidy ve ny vavahady fanamontsanana ao amin'ny faran'ny tavoahangy fitaratra amin'ny mpamokatra aerosol masira. Ary zahao raha ara-dalàna ny tsindry rehetra (Ny sira dia 0,24 MPa, ny menaka dia 0,05-0,5 MPa).
Azonao atao ve ny mametra ny fotoana fitsapana ny tester fanoherana ny sarontava ZR-1201?
Ny fenitra dia tsy mamaritra ny faharetan'ny andrana. Hatao aorian'ny fitombon'ny fivezivezan'ny zavamaneno (ao anatin'ny 15 segondra). Soso-kevitra ny halavan'ny fandrefesana ho 15 segondra.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fanodikodinana ny tester fanoherana ny sarontava ZR-1201?
Ho fampitahana dia ampirisihina hampiasa santionany mahazatra (toy ny santionany notsapain'ny fikambanana manam-pahefana). Rehefa manao fampitahana, ny santionany mitovy dia tokony hosedraina amin'ny toerana iray ihany ary ny santionany dia tokony hosokafana amin'ny fomba mitovy. Raha miahiahy ianao fa misy lesoka ao amin'ilay fitaovana dia nanoro hevitra anao ny handeha any amin'ny sampana fandrefesana mahafeno fepetra ho fanadiovana.